Waxaa jira tobanaan kun oo Casharrada in la qoray si loo hubiyo in arrinta iyo dhibaatooyin la xiriira ciyaaryahanka windows media 12 aan la xalin kaliya laakiin user sidoo kale helo gobolka ee qaraarka tahay in arrintan la xiriira. In tutorial oo dhan articles sida lagu soo ururiyey si loo hubiyo in dadka isticmaala helo go'aamada arrimaha caadiga ah ee meel ka mid ah oo sabab la mid ah sidoo kale waa mid ka mid ah Casharrada ugu fiican sidii ay u hubiyaan in user helo URL ka dhigi doonaa si tutorial iyo sidoo in la hubiyo in internetka marna gebi ahaanba la baaray.
1. Windows Media Player 12 Dhibaatooyinka: dhib WMP 12 Khaladaadka qaabeynta
Dadka isticmaala badan xalka kama dambaysta ah ee arrintan u sakhiray been in xaqiiqda ah in WMP 12 waxaa uninstalled markaas kadibna hal mar dib si loo hubiyo in dhibaatada haatan ma aha laakiin tutorial taas loo hubiyo in ay ka dhisay Microsoft Baadhista qalab ka dhigi doonaa yahay xallinta arrinta. Waxa kale oo ay keeni doonaa user ee dhinaca gobolka ah xal tahay qasabno oo kaliya dhowr wanaagsan.
2. Sida loo Guba CD-yada iyo DVD-yada ee Windows Media Player 12
Kuwani waa kuwa ugu khayr iyo gobolka hababka tahay in lagu soo bandhigo maqaalkan si loo hubiyo in logga waarta oo raadinaya dhamaadka user hab xiddig ka. The geedi socodka si fiican loo qeexay iyo hababka guud ahaan in lagu soo bandhigi hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo xallinta arrinta ama su'aal ah in uu jiray xiriir ka sarreeya, waayo, waxyaalaha wanwanaagsan ee nidaamka ka dhigi
3. Ku xiridda codecs in WMP 12
Rakibaadda codec Tayada waa hab in uu yahay adag oo sabab la mid ah sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka oo ka mid ah geedi socodka in lagu xusay tutorial ah. Waxaa loo hubiyo in dadka isticmaala ay natiijada ugu wanaagsan helo waqti gudaha iyo arrimaha qaabeynta loo xalin lahaa sida badan waxaa laga yaabaa arrin farsamo oo hubiyo in xalka ma fududa oo dhan ka dhigi lahaa ka dhigi doonaa. The Screenshot la socda ayaa sidoo kale ku siin aragti ah oo maskax leh:
Ku xiridda 4. windows media player 12 ilaa daaqadaha 7
Tutorial Taas ayaa ka dhigaysa hubiyo in arrimaha waafaqsan oo ka mid ah ciyaaryahankii Windows Media Windows 7 waa la xalin iyo user helo natiijada ugu fiican marka ay timaado rakibaadda iyo reinstallation barnaamijka si daaqadaha in lagu kor ku xusan. Tallaabooyinka mar kale halkan waa kuwa fudud iyo gobolka Screenshot tahay in lagu gundhig hubiyo in dadka isticmaala ay natiijada ugu wanaagsan oo aan wax arrintan oo dhibaato helo ka dhigi doonaa.
5. cayaartoy ah FLAC
FLAC waa qaab ah oo aan oo ay taageerayaan version mid ka mid ah windows media player by default iyo sabab la mid ah gaadmada ah oo dheeraad ah loo baahan yahay si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo dajinta lagu sameeyo hab ah in uu yahay ilaa filayo isticmaalaha. User ayaa heli doona dukumentiyada FLAC oo dhan iyo siyaabaha loo isticmaali karo si loo hubiyo in qaabeynta waxaa lagu taageeray laguna rakibay si Media ee Windows Player 12 ama wax kale Media Player ayaa lagu rakibay. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in dukumentiyada la akhriyo si buuxda uga dhigi
6. Rikoodh la Windows Media Player 12
Si aad u hubiso in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka ay timaado su'aal sakhiray oo uu soo sara arrintan la xiriira. Article ayaa ku qoran luqad fudud iyo tallaabooyinka waxaa weheliya ayaa sidoo kale ma mid aad u adag oo la raaci karo oo aan wax arrintan iyo dhibaatada in la hubiyo in user helo natiijada dhamaadka sida baahida iyo weliba hubinayaa in doorasho lagu qoro waxaa laga dhigay wax la heli karo ama looga faa'iideysan habka ugu fiican.
7. Saarashada YouTube videos in Windows Media Player
Tutorial Tani waa aalad kale oo awood leh taas oo ka dhigaysa hubiyo in video YouTube in ay Media Windows ka Player 12 download jirin kulanka oo dhan. Waxay kuu ogolaaneysaa in user ay u maraan talaabada hagitaan talaabo talaabo ah si loo hubiyo in ugu fiican ayaa u dhiibay oo user sidoo kale helo natiijada in ay yihiin gobolka of farshaxanka iyo si waafaqsan shuruudaha si ay u hubiyaan in user ay ka warqabto hababka la sharaxay iyo haddii uu jiro waqti soo socda waxa la fulin karaa iyada oo aan arrinka
8. Sidee u ciyaaro files AVCHD ciyaaryahanka Windows Media
Qaab AVCHD waa arrin horay loo gundhig gudaha kaamirada kala duwan iyo technology guud ee Panasonic iyo Sony hubiyaa in qaabka loo isticmaalo in lagu hubiyo in videos waxaa lagu toogtay. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo ciyaaryahan AVCHD oo aan arrinta iyo dhibaato. Hababka guud in lagu sharaxay article waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in qaab AVCHD aan la taageeray by default by Windows Media wax Player version:
9. ciyaaro files MKV on Windows Media Player 12 isticmaalaya Windows 8 iyo 8.1 pro
The hababka guud iyo terminologies in lagu sharxay qodobka ka mid ah in ay yihiin kooxda ugu fiican oo uu ugu caan qaab MKV waxaa la ciyaari karaan iyaga oo aan arin kasta haddii terminologies ee aan la raacin oo keli ah, laakiin waxaa sidoo kale codsatay. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in talaabooyinka la soo xusnay la raacay habka ugu fiican in aad hesho natiijada ugu fiican ee dib u dhac kasta oo aan sameeyo
10. Windows Media Player 12 script baadi
Weli tutorial kale awood badan taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira iyo sidoo kale hubineysaa in user helo natiijada ugu wanaagsan oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo xal ee 8 talaabooyin fudud oo uu helo shaqo sameeyey oo aan wax arrintan iyo dhibaatada
Waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in gaadmada ah oo ka mid ah oo dhan versions of Media Windows ka Player waa iskumaran oo sidaas daraaddeed hababka in ay yihiin kor ku xusan waxaa lagu saleyn karaa in ciyaaryahan kasta windows media ay ka mid yihiin ciyaaryahanka windows media 12 in arrinta la xalin gudahood markii oo uu soo dejiyeen user. Qoraalkan ayaa sidoo kale waa in la kala cadeeyo in user ah waa in aan marnaba isku buuqo marka ay timaado qalad qaabeynta kala duwan oo ka mid ah WMP nooc kasta oo version.
> Resource > WMP > 10 Su'aalaha ku windows media player 12